IZA MOA JESOSY KRISTY? - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
IZA MOA JESOSY KRISTY?
I Jaona rehefa nahazo ny hafatra dia milaza, fa izy no nomena an‟ilay hafatra manao hoe: “ny filazana an’i Jesosy Kristy”. Ka raha ohatra izany ka hoe, tsy manana boky hafa mihitsy ianao hafa tsy ny apokalypsy, ka vitanao ny nianatra azy hatramin‟ny farany, dia efa ampy hahalalanao izany Jesosy Kristy izany. Ato amin‟ny andininy faha 5 dia efa milaza sahady izy hoe: apokalypsy 1:5 – 6 «5 ary avy amin’i Jesosy Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ny maty ary Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany. Ho an’izay tia antsika ka namaha* antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny ràny, [* Gr. nanasa] 6 sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Ray, ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena. »
Eto dia efa ahitantsika sahady ny mety ho anarana azo hiantsoana azy toy ny hoe:
– Vavolombelona marina,
– Lahimatoa amin’ny maty,
– Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany.
– Ho an’izay tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny ràny, »
Ilay Jesosy Kristy izay ho resahintsika eto izany, dia vavolombelona marina, fa tsy vavolombelona mandainga. Antsoina ihany koa hoe: Ilay Lahimatoa amin‟ny maty. Izany hoe hiresaka betsaka mikasika io fahamarinan‟i Jesosy Kristy io izany isika araka ny soratra masina. Ka rehefa hiresaka an‟io fahamarinany io isika, dia hianjahanja eo daholo ny fampianaran-diso sy ny fahadisoan-kevitra rehetra, vokatry ny tsy fahalalana ny soratra masina araka ny filazan‟i Jesosy Kristy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalana ny soratra masina.
Lahimatoa amin‟ny maty: Dia tsy maintsy hiresaka ihany koa izany isika momba izany hoe: ahoana ihany koa izany hoe Jesosy Kristy maty izany? Maty ahoana?Ahoana no ilazan‟ny soratra masina an‟izany?
Lehiben‟ny mpanjaka amin‟ny tany: Dia mbola hiresaka ihany koa isika, ny amin‟ny maha-mpanjaka an‟i Jesosy Kristy ihany koa. Maha- mpanjaka ny tany azy.
Ho an‟Ilay tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin’ny fahotantsika tamin’ny ràny. Dia mbola hiresaka betsaka momba izany fahafatesany izany ihany koa isika, izay nandatsahany ny ràny, hamantatra izany rà soan‟i Jesosy Kristy. Ka rehefa atao ny“analyse” na ny fitiliana ity rà ity dia ho fantatra ny “sokajin-drà”, ary dia ho hitantsika fa tsy hitovy amin‟ny an‟ny olona tsotra na ny an‟ilay Jesosy Kristy sandoka ny “groupe de sang” ny. Hiresaka momba ny fanafahana izy,
Misy sonia faharoa indray eo, satria niresaka momba ny fahafatesany izy teo, dia ilay Jesosy Kristy izay maty ka nilevina tao ampasana, dia nitsangana tamin‟ny maty, ary niakatra tany an-danitra. Mbola vao aty amin‟ny fitarihan-teny dia efa manao sonia izy fa hoe: maty Izy io, dia velona sy nitsangana tamin‟ny maty avy eo; niakatra any an-danitra, ary dia mbola ho avy hitsara ny velona izay mbola tsy maty amin‟ny fihaviany sy izay efa maty ihany koa aza.
Izany hoe maty Izy araka ny Soratra Masina, nilevina Izy araka ny Soratra Masina, nitsangana Izy araka ny Soratra Masina, ary mbola ho avy indray Izy araka ny Soratra Masina .
Satria misy ny Jesosy Kristy maty sy nilevina ary nitsangana tsy araka ny Soratra Masina.
Raha ny tena marina moa izany, dia fampianarana sandoka tsy araka ny Soratra Masina ny nampianaran‟ny olona ny momba ny nahafatesany ny nilevenany, ny nitsanganany. Ka matoa io natao sonia hatrany am-piandohana hoe: “Lahimatoa amin’ny maty”, nanafaka antsika tamin‟ny fahotana, nanafaka antsika tamin‟ny ràny, dia misy misitery sy zava-miafina lehibe ao, ary io dia tsy zakan‟ilay losifera sy satana, sy ny mpanaradia azy, io momba ny nahafatesan‟i Jesosy Kristy io. Satria maty Izy ho famonjena izao tontolo izao, nilevina Izy ho famantarana fa Izy no mpamonjy izao tontolo izao, nitsangana Izy ho fampiorenana ny finoana. Io anefa dia efa famantarana, efa apetrany sahady aty ampiandohana. Ka ho antsika izay mamaky hatraty ampiandohana ka misy fanahy hafahafa : demonia, na kalanoro, na fanahy mamitaka, na fanahy avy amin‟ny maty, na tromba na avy amin‟ny doany ,na kokolampy sns, ny fampianarana tena tsy zakan‟izy ireo indrindra, dia ny momba ny fahafatesan‟i Jesosy Kristy, ny nilevenany sy ny nitsanganany teo ity, ny amin‟ny maha-vavolombelona marina ilay Jesosy Kristy. Io no fampianarana tena tsy zakan-dry zareo indrindra, satria satana mantsy dia efa nampianatra sy nanary ny fahamarinana tanteraka, ka dia tena tsy zakan-dry zareo ny tena fahamarinana avoakan‟io fampianarana io.
Fa ankehitriny rehefa nivoaka ity fanambarana ity, dia be dia be ny mihovitrovitra sy tsy mahita tory ary dia tsy mahafehy tena mihitsy ireo, mpampianatra hevitra diso fa tena mahery vaika dia mahery vaika tokoa ny fampianarana ny fahamarinana, izay hoharahintsika eto ity. Ny fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe :
 Iza marina io Jesosy Kristy io ?
 ary avy aiza no fihaviany?
 Zanak‟iza IZY? ,
 ary ahoana ny momba azy io?
 Inona no zavatra nataony teto ambony tany?
 Nahoana Izy no novonoina?
 Nankaiza Izy rehefa niala tety ambonin‟ny tany?
Dia hoy ny olona sasany hoe any an-danitra any Izy!!. Dia tadidiko tsara ny namalian‟ilay ramatoa izany fanontaniana izany tany Arivonimamo, tamin‟ny taona 1982 tany ho any, raha nanao tafika masina tany izahay, ka namangy tokatrano vitsivitsy. Dia nisy ramatoa iray nanasa lamba tao amin‟ilay tokatrano iray notsidihinay. Izahay moa dia tanora vitsivitsy izay tokony ho 23 taona teo ho eo daholo.
– Tanora: Dia natsafaina ilay ramatoa: manao ahoana ianao tompoko o!
– Neny: Dia namely izy sady mbola nanasa lamba ihany: manao ahoana nareo,
– Tanora: miala tsiny raha mametraka fanontaniana vitsivitsy aminao izahay neny, fa izahay moa dia tanora mpitory ny filazantsara ka mba azonay atao ve ny mametraka ireo fanontaniana ireo?
– Neny:tsy maninona hoy izy fa azonao atao izany fa zavatra mahasoa izany fa sady manasa lamba ihany aho no mihaino anao.
– Tanora:ianao ve mino an‟Andriamanitra ry neny?
– Neny:Eny hoy izy, iza moa anaka no olona tsy hino an‟Andriamanitra izany?
– Tanora:ianao ve neny mino an‟i Jesosy Kristy?
– Neny:eny hoy izy, izany no efa nampianarina anay, i Jesosy Kristy no maty mba hahazoantsika famonjena, ary voafantsika tamin‟ny hazo fijaliana mba hamonjena antsika;
– Tanora:hay fantatrao tsara izany, ary moa fantatrao ve fa hoe nitsangana tamin‟ny maty izy io?
– Neny:izany no fanekem-pinoana kristiana, –
– Tanora:ary rehefa nitsangana tamin‟ny maty izy, dia nankaiza raha ny fahalalanao azy? _
– Neny:dia niakatra any an-danitra izy ary dia mbola ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty.
– Tanora: ary moa mba fantatrao ve hoe: izy niakatra any an-danitra iny, inona moa izao no mba hataony any amin‟izao fotoana izao?
– Neny: asa indray aloha anaka izay hataony any fa izaho mbola tsy tany an-danitra fa angamba matoritory izy miandry ny fiverenany ety ambonin‟ny tany ety.
– Tanora: misaotra anao ary ry neny fa dia vita ny fanadihadiana.
Mazava izany fa dia, be dia be izany ny olona no mahalala fa hoe maty Jesosy Kristy, ary dia nilevina sy nitsangana tamin‟ny maty, ary dia niakatra any an-danitra. Fa dia betsaka ihany koa ny olona no tsy mahalala akory hoe inona moa no ataony any amin‟izao fotoana izao? Ny an‟ny sasany aza moa rehefa misy kotroka sy mitselatra ny andro dia milaza izy fa hoe mampirin-trano izay Andriamanitra, ka mikisakisaka ny latabatra sy ny armoire sy ny seza ka migodogodona ety amitsika ety.
Ka dia izany no mahatonga ilay fanontaniana hoe “iza marina moa ity Jesosy Kristy, izay tompon‟ny fanambarana ity?”
Ny baiboly aza moa dia milaza fa misy karazany roa ity Jesosy Kristy ity:
– misy ny Jesosy Kristy tena izy;
– ary misy ny Jesosy Kristy sandoka.
Fa dia tena be dia be ihany koa ny olona no tsy mba liana, na te hahafantatra ny hoe ahoana moa no hanavahana ireto Jesosy Kristy roa ireto, dia ilay marina sy ilay sandoka, fa dia ataon‟ny olona an-kitapo iray fotsiny hoe: rehefa mino an‟i Jesosy Kristy ianao, dia ataovy ampy izay e!, kanefa ianao tsy afaka hino an‟io Jesosy Kristy io izany mihitsy raha tsy maha-fantatra tsara izay tena izy.
Misy fampianarana omena anao momba an‟io Jesosy Kristy io eto, ka eo ianao no manampa-kevitra hoe: hino an‟izany aho na tsy hino. Ka raha sanatria ary, ka ilay Jesosy Kristy tsy izy no nampianarina anao, dia tokony hiala ao ianao, ka handray ilay tena Izy.
Ohatra hoe: sahala an‟ilay olona mianatra mitendry gitara ireny. Ohatra ireto olona mirahalahy ireto, izay mbola tsy nahay nitendry gitara mihitsy kanefa nahita gitara, ary dia naniry ny hitendry izany. Ilay gitara dia mbola mivalana tsy manaraka ny firindram-peo na ny “accord” tokony ho izy, no nianaran-dry zareo nitendry, ary dia nitendry hira tamin‟io gitara io izy mirahalahy, ary dia nety ny feo nivoaka avy teo. Ka rehefa misy hira mandeha, dia mitendry izy ary mety ilay hira. Indray andro rehefa nisy olona tena nahay nitendry gitara nandalo, ka nahita azy mirahalahy nitendry ilay gitara, dia gaga hoe “accord” inona izany hitendrenareo roalahy azy izany, dia niteny moa izy mirahalahy hoe: io dia notendritendrenay fotsiny tamin‟izao, fa io no nisy teo. Dia noraisin‟ilay olona kalaza be izay tena mahay mitendry ilay gitara, ka rehefa notendreny araka ny firindram-peo na ny “accord” tokony ho izy, dia tena mivalana be mihitsy ilay gitara, ka hoy izy: izy ity rehefa ho tendrena dia tokony hanaraka ny fitsipika, na ny fenitra na “norme” misy eran-tany, izany hoe misy ny naoty tokony hisy azy avy ny tady na ny “corde” rehetra; dia naveriny hanaraka ny feo tokony ho izay avokoa ny tadin-gitara tsirairay, ary napetrany tao anatin‟ny fenitra iraisam-pirenena na nataony “diapason”.
Rehefa nilamina tsara ny feo rehetra, dia naveriny notendrena ilay hira notendren‟izy mirahalahy teo, tamin‟ilay gitara mivalana be teo, ka dia gaga izy mirahalahy raha nahare ny feon‟ilay gitara ka vaky vava hoe: endre izany hatsaran‟ilay feon‟ilay gitara, dia noraisin‟izy mirahalahy indray ny gitara ka naveriny notendrena ilay feon-kira ary nataony araka ny fomba fitendriny azy tamin‟ilay gitara mivala be teo, ka tsy nisy nety tamin‟izay hitsiny intsony ny feon-kira rehetra, tsy nisy feon-kira nivoaka fa feo mikorontana no heno, dia vaky vava izy hoe naninona izy ity no nanao ohatran‟ ity!.
Dia toy izany koa, be dia be izany ny olona no nampianarin‟ny olona Jesosy Kristy sandoka, ka rehefa tena fantany Ilay tena Izy, dia eo izy vao tena gaga hoe: hay tsy nandeha tamin‟ny tena izy aho, hany ka lasa sahirana indray ilay olona, satria tsy mitovy amin‟ny “accord” fitendriny azy ilay izy, satria efa tena lasa “diapason” ilay izy. Ka noho izany dia alohan‟ny hitendry ilay feon-kira, dia tsy maintsy hatao “diapason” tsara aloha ilay feo rehetra.
Noho izany, alohan‟ny hiangana, dia aleo aloha fantarintsika tsara ny hoe inona ny fototry ny finoana an‟i Jesosy Kristy ity, Avy taiza izy? Mba tsy ho sahirana isika, satria na ny mpitondra hafatra aza ve tsy ho fantatrao, dia handray ilay hafatra ianao? Ka sao dia ilay mpitondra hafatra sandoka no tonga ao aminao ka dia ho sahirana ianao.
IZA MARINA ARY ITY MPITONDRA HAFATRA ITY?